N'ogbe Multi Storey Steel Structure Building & Hotel & Office & School & Library & Shopping Center High Steel Structure Building Manufacturer and Supplier |Deshion
Ụlọ ihe owuwu dị n'ọtụtụ ụlọ ahịa & ụlọ oriri na ọṅụṅụ & Ụlọ akwụkwọ & Ụlọ Akwụkwọ & Ụlọ Ahịa Ụlọ Ahịa High Steel Structure Building.
Ọkọlọtọ: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS
Ọkwa: Q235 Q345 & Q355B ígwè
Ebe amụrụ: Zhongshan, China
Ihe: A36) ASTM (Q235B/Q345B) GB S355JR (EN)
Ngwa: Ụlọ oriri na ọṅụṅụ.Ụlọ ọrụ / ụlọ ahịa
Nkwenye: ± 5%
Isi etiti: welded H Steel beam, Steel Truss
Eriri nke abụọ: C&Z Purlin, ihe nkwado
Mkpuchi mgbidi: Mgbidi mkpuchi iko
Ihe mkpuchi ụlọ: Mpempe agba agba agba, Sanwichi panel ajị anụ na ntupu
Ohere: A ga-akọwapụta ya
Site na: A ga-akọwapụta ya
Ọgwụgwọ elu: Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ galvanized na agba
Arụmọrụ: Nchekwa, mgbochi mmiri, ihe mkpuchi anụ ihe, wdg.
Nkọwa ngwugwu: Mbupu mbupụ pụrụ iche
Port: Shen Zhen/Zhong Shan
Njirimara nke usoro ihe owuwu ọtụtụ
1.Great ígwè ductility, ezigbo seismic arụmọrụ nke Ọdịdị
2.Light arọ, arọ nke ígwè Ọdịdị ogologo ụlọ bụ banyere 60% nke ihe owuwu, nke nwere ike dị ukwuu ibelata na-eri nke ntọala na Ọdịdị.
3.Short na-ewu oge, na-ewu ọsọ nke ígwè Ọdịdị bụ banyere 1.5 ugboro ngwa ngwa karịa nke na-ewusi ihe owuwu n'ihi na ya elu ogo nke factorization.
4.Small nhazi mpaghara, mpaghara kọlụm ígwè bụ ihe dịka 1/3 nke kọlụm kọlụm ma chekwaa 3% nke ebe ụlọ ahụ.
5.Lọ elu ụlọ elu, akụkụ ndị na-agba ígwè na-adịkarị mkpụmkpụ karịa ihe na pipeline nwere ike ịgafe na ntanetị nke ígwè ígwè.Otu ịdị elu ahụ na-enye ohere ka e mepụta ọtụtụ ala iji mee ka ala ala.
1.The etiti mejupụtara ogidi na ibé, na-ebu vetikal na mpụta agha
2.The arụmọrụ nke isiike etiti megide mpụta ike bụ ogbenye, mpụta deflection nke Ọdịdị bụ nnukwu, n'ozuzu kwesịrị ekwesị maka Ọdịdị nke n'okpuru 20 akụkọ.
3.The kọlụm n'ozuzu na-eji igbe ígwè kọlụm ma ọ bụ ihe jupụtara ígwè tube kọlụm
4.The ihe-ejuputa ígwè tubular kọlụm jupụtara ihe na gburugburu ọkpọkọ ma ọ bụ igbe kọlụm, nke ọ bụghị nanị na nwere uru nke ígwè Ọdịdị, ma na-eme ka zuru ezu ojiji nke ọma mkpakọ Njirimara nke ihe.
Nhazi-tube ihe owuwu
1.This ụdị structural usoro bụ n'ozuzu mejupụtara mesikwuru ihe isi tube na mpụta ígwè etiti.
2.The isi tube bụ a square, akụkụ anọ ma ọ bụ polygonal cylinder gbara gburugburu ihe karịrị anọ mesikwuru ihe mgbidi, n'ime ime na-nyere a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke longitudinal na transverse mesikwuru ihe partitions.Mgbe ụlọ ahụ dị ogologo, a ga-edobe ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nchara nchara na mgbidi isi;
3.The mpụta ígwè etiti na-mere nke ígwè kọlụm na ígwè doo.
4.The mpụta deflection nke ụlọ bụ tumadi eguzogide site isi tube, nke a na-ejikarị structural usoro na elu ụlọ elu.
Mkpesa ike nguzogide nke elu - ịrị elu ígwè Ọdịdị - outrigger truss
1.Outrigger truss bụ ihe dị mkpa iji belata mpụta nke ụlọ elu dị elu.
2.Outrigger trusses na-adịkarị n'elu ngwá ọrụ ma ọ bụ ebe mgbaba n'ala, obosara site na obosara nke ụlọ ahụ, elu bụ otu ma ọ bụ abụọ akụkọ elu, n'ozuzu na-edozi atọ ruo anọ n'ala dum n'ala elu.
3. The ụkpụrụ nke outrigger truss bụ na mgbe ụlọ ahụ na-edobe n'akụkụ ntughari, ike nke axial nke dị n'elu kọlụm ígwè dị n'èzí na-eme ka ọkpụkpụ azụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dịghachi n'akụkụ.
1.In iji pụta ìhè uru nke ngwa ngwa na-ewu ọsọ nke ígwè Ọdịdị, n'ala na-ebu efere na-ejikarị eme ihe na elu-ịrị ígwè Ọdịdị.
2.Mgbe ị na-eji efere na-ebu n'ala, a naghị achọ ka ọkpụkpụ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ.Enwere ike iji efere na-ebu ala dị ka bọọdụ na-adịgide adịgide, nke dị elu na-agba ọsọ nke ịrụ ọrụ ma nwee ike dochie akụkụ nke nkwado ala.
3.Floor ebu efere na-emekarị na-emeghe, mechiri emechi, truss ụdị
Ụdị ebili mmiri ahụ bụ symmetrical na oge na-ehulata nke ọma na nke na-adịghị mma dị nso, ndị na-esi ike efere na-eme ka mpaghara dị irè buru ibu, ikike ibu dị ike na ogbo owuwu.
Jiri efere ebu n'ala nke ogbo nwere ike dochie akụkụ nkwado nke ala
Ọrụ mgbochi ọkụ Efere na-ebu ala abụghị ọkụ ọkụ, ala nke efere ahụ kwesịrị ka a na-emesi ike, ihe nkedo nke ala adịghị mkpa ịfụ mkpuchi ọkụ.
Ihe owuwu Idowe ọsọ nke efere na-ebu ala na-adị ngwa ngwa, mana njide nke igwe nchara na-adị nwayọọ
Jiri Ala nke ala nwere ụdị ebili mmiri, siri ike na enweghị isi na ọdịdị adịghị mma
Akụ na ụba Ọnụego ojiji ụdị slab nke ala dị elu yana ọnụ ala.ezumike nke ala na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ihe eji eme ihe n'ala ihe dị ka 25, belata ịdị arọ nke ụlọ ahụ, na-echekwa ihe nhazi na isi ego.
Efere ihe eji ebu ala mechiri emechi
Mpaghara dị irè nke osisi ahụ dị ntakịrị na ikike ibu ya adịghị mma na ogbo owuwu
Ajụjụ: Ị nwere ọrụ nwụnye?
A: Ee, anyị nwere ọrụ nduzi nrụnye nke ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka injinia gụnyere Visa cost.round njem tiketi, nri & ebe obibi yana mkpuchi mpaghara.
A: Ndụ ojiji nke isi ihe owuwu bụ ndụ ejiri mee ihe, na-abụkarị afọ 50-100 (arịrịọ ọkọlọtọ GB)
Ajụjụ: Ogologo oge ole ka ndụ ihe eji eme ihe mkpuchi ụlọ?
A: Ndụ ojiji nke mkpuchi PE na-abụkarị afọ 10-25.The ojiji ndụ nke elu ụlọ ìhè mpempe akwụkwọ bụ mkpumkpu, na-emekarị 8-15 afọ
Ajụjụ: Gịnị bụ mgbochi nchara ọgwụgwọ maka ígwè Ọdịdị?
A: Mgbochi nchara ọgwụgwọ nke ígwè Ọdịdị Nkịtị mgbochi nchara agba
Agba mgbochi nchara na epoxy zinc primer
galvanization na-ekpo ọkụ
hop-mikpu galvanization + PU imecha
Ọdịdị igwe anaghị agba nchara: Nke 301/304/316 igwe anaghị agba nchara Ọdịdị
Ajụjụ: Olee otú anyị ga-esi na-akwado ụfọdụ ọrụ?
Nke gara aga: Sistemụ Igwe Igwe Igwe Igwe igwe anaghị agba nchara Handrail Glass Panel Ngwaahịa
Osote: Oghere Frame Steel Truss Stadium Steel Structure & Steel Roof Structure